Igwe ihu igwe: ihe ọ bụ, njirimara ya na ọnọdụ gburugburu ebe obibi | Netwọk Mgbasa Ozi
El Akọrọ ihu igwe A makwaara ya dị ka ihu igwe ọzara. Ọ bụ ụdị ihu igwe nke njirimara ya bụ enweghị ụkọ mmiri ozuzo kwa afọ. Naanị ya nwere oke mmiri ozuzo nke sitere na 300 mm n'ime afọ. Otu njirimara kachasị na ihu igwe a bụ oke ọpụpụ ya.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile, mmalite, ebe, osisi na ahịhịa nke ihu igwe.
2 Ihe na-ekpebi udu mmiri
2.1 Enweghị mmiri
2.2 Na-ekpo ọkụ ma na-ajụ oyi
2.3 Uzu mmiri kariri mmiri ozuzo
3 Okpokoro na-ekpo ala mmiri na-ekpo ọkụ
4 Omume akụ na ụba na ihu igwe
Ọ bụ ụdị ihu igwe ebe oke ikuku na-adị elu. Evapotranspiration dịzi Karịa ọnwụ nke mmiri nke na-eme ka elu ala doo anya n'ihi evaporation kpọmkwem. Na mgbakwunye, anyị ga-agbakwunye trans trans nke mmiri site na osisi ndị dị na ebe ndị a. Na nchikota evaporation si na mmiri na transpiration si osisi a maara dị ka evapotranspiration. Ihe omume a na - akpata oke mmiri ozuzo ka ọ dị ala karịa kwa afọ.
Usoro a nwere ike ịmalite n'ihi ọnọdụ nke enyemaka nke mpaghara nwere, n'ihi usoro mmiri mmiri oyi na-ejedebe evaporation ma na-emetụta ọkwa iru mmiri. Ihe ndị a niile na-emepụta usoro okike ndị a maara dị ka ọzara n'ụsọ oké osimiri. Ebe ndị a na-adịkarị n'akụkụ ebe okpomọkụ. Ọ dị ma ọ bụ obere na ogo nke sitere na ogo 35 na 15. Na mgbakwunye, na ebe ndị a, e nwere ụdị ahịhịa na ahịhịa pụrụ iche nke nwegoro ike ịmegharị mgbanwe dị iche iche iji biri na gburugburu ebe ndị a dị egwu.
A na-akpọkarị ọzara ndị a ebe ọ bụ na ha nwere nnukwu ájá na okpomọkụ dị ọkụ. Agbanyeghị, ikuku mmiri na-efepụ nwekwara ike ịmalite ebe oyi dị ka Antarctica na ebe ugwu ugwu. Ma ọ bụ na ebe ndị a nwere oke iru mmiri. Anyị na-echeta na iru mmiri nke evapotranspiration na-akpata bụ njirimara bụ isi na-akọwa ihu igwe dị nkụ.
Kama imegide, anyị na-ahụ ụfọdụ mpaghara ọzara nwere oke mmiri ozuzo na iru mmiri. Ndị a bụ ebe ndị ọzọ na-ekpo ọkụ nke na-enweta ifufe mmiri dị elu n'afọ niile. Mmiri mmiri ozuzo nke na-ada na ebe ndị a na-apụtaghị oge ma na-egosipụta n'ụdị oke ikuku. Mgbe ha nwetara onyinye a nke mmiri ozuzo, iyi na ala na-aza mmiri n'ihi na ha enweghị ikike nzacha. Ọ na-anọ naanị awa ole na ole ebe ọ bụ na mmiri na-amịpụ ngwa ngwa na ngwa ngwa.
Ihe na-ekpebi udu mmiri
Anyị ga-ahụ nke bụ isi ihe na-ekpebi ịdị adị nke ihu igwe efe na mpaghara.
Dị ka anyị kwuru na mbido, enweghị iru mmiri bụ njirimara kachasị pụta ìhè nke ụdị ihu igwe a. O bukwa na oke oke nkari di n’ebe ndia. Ọ bụghị na ọ bụ naanị ala kpọrọ nkụ n'ihi enweghị mmiri ozuzo, ma otú ahụ ka ikuku dịkwa. Ọtụtụ mpaghara nwere oke pasent nke evaporation, nke a bụ pasent kachasị elu nke ọdịda. Nke a na-eduga na-aga n'ihu ọnwụ nke mmiri. Offọdụ n'ime ọzara na-ekpo ọkụ n'ụwa nwere ọchịchọ pụrụ iche. Mmiri ozuzo ya na-ekpochapu tupu ya eruo ala. Ọ bụ ezie na nke a na-eme oge niile, enwere ụfọdụ mmiri ozuzo na-etolite ụfọdụ ọgbụgba osisi na anụmanụ. Nke a na-enye ohere na mpaghara ụfọdụ anaghị adịkarị mma.
Na-ekpo ọkụ ma na-ajụ oyi
Uzo ozo nke neme ka udiri anwu rapu bu ihe di iche netiti ekpo oku na oyi. Enwere ụfọdụ ala kpọrọ nkụ nke nwere oge oyi ma ezigbo ọkọchị. Otu n'ime ha bụ ọzara Sahara nke iwu a oge niile, ebe ọzara Gobi na-egosipụta oge abụọ a. Oge oyi anaghị eru oyi. Onye njem na-akwadoghị maka ọnọdụ ndị a jọgburu onwe ya nwere ike ịnwụ site na ọrịa okpomọkụ n'ehihie ma ọ bụ ịnwụ nke hypothermia n'abalị. N'ihi nke a, a na-ahụta ebe nwere ihu igwe dị egwu dị egwu nye ndị na-enweghị uche.
Uzu mmiri kariri mmiri ozuzo
N’ebe ihu igwe kpọrọ nkụ jupụtara, mmiri na-ekpokarị ọkụ karịa mmiri ozuzo. Ihe ndị a na-ebute na ala agaghị enwe ike ịnabata gestation nke ndụ osisi. Ọnụ nke evaporation na-abụkarị ruo 10 ugboro ukwuu karịa nke ọdịda. Nke a na - eme ka iru mmiri zuru ezu dị ala na ala.
Okpokoro na-ekpo ala mmiri na-ekpo ọkụ
Ọzara na ihu igwe na-ekpo ọkụ dị na mpaghara subtropical na gburugburu ebe obibi ha na etolite n’etiti na obere ala latitude n’agbata ogo 20 na 35. N'ime mpaghara ndị a enwere mgbago ikuku na-aga n'ihu n'ụzọ kwụsiri ike. Na mgbakwunye, ndị a bụ mpaghara ebe nrụgide dị elu na-akwalite ala akọrọ na ọnọdụ dị ọkụ. Site n'inwe usoro nrụgide dị elu na-aga n'ihu, enwere nkwụsi ike gburugburu ebe obibi nke na-anaghị ekwe ka mbata nke oké ifufe.
Ala mmiri na-ajụ oyi na-ekpo ọkụ dị na ebe ndị ahụ nwere oke ugwu. Dịka ọmụmaatụ, e nwere ọzara Tabernas na Almería. N'ihi ya, anyị nwere na ọnọdụ nke ọnọdụ ndị a anaghị adabere nke ukwuu na latitude kama na elu. N'aka nke ọzọ, anyị nwere ọzara nke nwere ike igosipụta onwe ha na ebe ndị ahụ dị anya site na ebe okpomọkụ. Ọ na-abụkarị ọzara ndị a na-aga n'ihu site na ikuku ụwa.
Omume akụ na ụba na ihu igwe
Buru n'uche na ọnụ ọgụgụ ndị na-eto eto na mbara igwe na-achọ ụfọdụ ọrụ akụ na ụba dị iche iche. Ọnụ ọgụgụ ndị bi n'ókèala ndị a siri ezigbo ike ibi. Ọdụ ị nwere n’ọzara a dị ụkọ n’ihi ọnọdụ dị egwu nke gburugburu ebe obibi a na-egosi.
Dị ka ọ na-adị, otu ìgwè mmadụ na-anwa itinye uche n'ụsọ mmiri ma na-ejigide nso na ala na ndagwurugwu ndị osimiri na-emepụta. Otu njiri mara obodo ndị a bụ na ha na-agagharịkarị. Ihe kpatara nke a bụ n'ihi Establishtọpụta nke ọma n'ókèala ndị a nwere mgbagwoju anya.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ihu igwe na ala ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Akọrọ ihu igwe